फूल भित्र भ्रष्टाचार गर्नेहरुले दिए सञ्चाकर्मीलाई धम्की –
फूल भित्र भ्रष्टाचार गर्नेहरुले दिए सञ्चाकर्मीलाई धम्की
सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा रुमलिएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल दिनप्रतिदिन खोक्रो बन्दै गएको छ । फ्लोरिकल्चरलाई सिमित व्यक्तिहरुले आफ्नो पेवा मात्रै बनाएको छैन् दुहुनो गाई बनाएको छ । पछिल्लो समय पुष्प व्यवसायीलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नका लागि नीजि क्षेत्रका फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालसँग मिलेर ३० करोड लगानी गर्ने सम्झौता नै गरेको थियो । तर सरकारको लगानीमा फ्लोरिकल्चरका केही व्यक्तिहरुले गिद्धे नजर लगाएपछि २१ करोड दिएर बिचैमा रोकेको थियो । सरकारसँग लिएको २१ करोडमा झारो टार्ने काम बाहेक गतिलो काम गर्नै सकेनन् भन्दा कत्ति पनि फरक पर्दैन् । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई सरकारले पोस्न खोज्यो या त फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले आफ्ना नजिकका व्यवसायी आफन्त र आसेपासेलाई पोस्न खोज्यो । केही व्यवसायीको ग्रिन हाउस, र प्रचारमै २१ करोड सरकारी बजेट सकाएको छ । तर अहिले सम्म उपलब्धी भने हात लाग्यो शुन्य नै छ । अचम्मको कुरा त के भने सरकारले पुष्प प्रवद्र्धन नीति २०६९ कार्ययोजना अनुसार सरकारको ६५ देखी ७४ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालसँग सहकार्य गर्नेे सम्झोता गरेको थियो । जुन नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा यत्रो ठुलो रकम लगानी गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । फ्लोरिकल्चरले सरकारी ठूलो बजेट चरम दुरुपयोग गरेपछि अख्तियारले नै चासो देखाएको थियो । हुन त फ्लोरिकल्चरले सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेपछि बिचैमा रोकेको थियो । तर त्यतिबेलासम्म ढिलो भईसकेको थियो । त्यतिबेलासम्म सरकारले फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई २१ करोड रकम दिईसकेको थियो । तर सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भयो । नेपाल फूलमा अहिले पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन् । अहिले पनि बार्षिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको फूल छिमेकी देश भारतबाटै आयात हुन्छ । अझ टिठ लाग्दो कुरा त के भने गुलाफको फूल बार्षिक करोडौंको कारोबार हुन्छ तर ७० प्रतिशत गुलाफको फूल भारतबाटै आयात हुन्छ । अन्य फूलहरुमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन् । फूल व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउछु भनेर गफ दिएको पनि बर्षौ बितेको छ तर पत्याउने कसरी ? एकाध व्यक्तिको पेवा पनि बन्नु हुँदैन् फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल, सम्पुर्ण पुष्प व्यवसायीको साझा संगठन बन्न सक्नुपर्छ ।
यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार
अहिले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारकको बहुचर्चित विषय बनेको छ फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई सरकारले दिएको रकमको चरम हिनामिनाको विषय । जसलाई पाँच बर्ष भित्रमा ३० करोड उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था नै गरेको थियो । हो सरकारले फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई बजेट निकासा गर्नकै लागि नीति नै परिवर्तन गरेर चोरबाटोबाट दिनुले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठ र पुर्व अध्यक्ष लोकनाथ गैरेको कार्यकालमा सरकारबाट करोडौं रकम लिएर आफुखुशी दुरुपयोग गरेको थियो । २०७१ आषाढ ६ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट पुष्प व्यापारीहरुसँगको नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन सजिलो बनाएको प्रमाण फेला परेको छ । जुन कुरा पुष्प प्रवद्र्धन नीति २०६९ मा नै उल्लेख गरी राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकम छुट्याएको थियो । पुष्प प्रवद्र्धन नीति २०६९ कार्यान्वय कार्ययोजना भन्दै नेपाल सरकारको ७४ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई ३० करोड उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा नै फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालको नाम तोकेर पाँच बर्षका लागि बजेट निकास गर्ने नीति निर्माण गर्नुलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्न सकिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा ४ करोड ४० लाख ३२ हजार ५ सय, २०७२-७३ मा ५ करोड १३ लाख ७१ हजार २ सय ५०, २०७३-७४ मा ५ करोड ८७ लाख १० हजार त्यसैगरी आव २०७४-७५का लागि ६ करोड ६० लाख ४८ हजार ७ सय ५० र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ७ करोड ३३ लाख ८७ हजार ५ सय गरी २९ करोड ३५ लाख ५० हजार दिने फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई दिने सम्झौता भएको थियो । कुनै पनि व्यवसायीहरुको एउटै संस्थालाई करोडौ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको प्रष्ट हुन्छ ।
पुर्व अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षको मत बाझियो
फ्लोरिकल्चर एशोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष लोकनाथ गैरेले सरकारले एशोसिएसनलाई २१ करोड बजेट बिनियोजन गरेको खुलासा गरेका छन् । वर्तमान सचिब हिरामणी शर्माले पनि २१ करोड लिएको बताएका छन् । तर एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजुले सरकारबाट १० करोड मात्रै लिएको दाबी गरेका छन् । यसरी आ–आफैंमा मत बाझिनु पनि शंका पैदा भएको छ । एउटै संस्थाका जिम्मेबार व्यक्तिहरुको फरक फरक कुरा आउनु अथवा मत बाझिनु चानचुने कुरा होईन्, के कुनै पनि संस्थाको जानकार अध्यक्ष मात्रै हुन्छ । पक्कै हुँदैन् । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले सरबारबाट करिब ११ करोड मात्रै लिएको दाबी गरे पनि त्यही संस्थाका आर्का जिम्मेबार सचिब हिरामणी शर्माले भने २१ करोड लिएको कृषि टेलिभिजनको कार्यालयमे आएर बोलेका छन् । जब की गैरे अध्यक्ष हुँदा नै सरकारसँग नीजि क्षेत्र मिलेर काम गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । तर पुर्व अध्यक्ष र सचिबको कुरा मिले पनि बर्तमान अध्यक्षको मत बाझिएको छ ।
कुमार कसजु श्रेष्ठको धम्की
फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले सरकारबाट लिएको २१ करोड रुपैंया दुरुपयोग गरेको खबर प्रशारण गरेपछि कुमार कसजु श्रेष्ठले धम्की नै दिएका छन् । खबर प्रशासरण पश्चात फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कसजुले गलत खबर प्रशारण गरेको भन्दै कृषि टेलिभिजनका कर्मचारीलाई फोनमा धम्काएका छन् । कसजुले ह्यारेसमेन्टको मुद्धा हाल्छु भन्दै धम्की दिएका थिए । उनले म्यासेज र फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालको लेटर प्याडमै धम्कीपुर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै चिठ्ठी नै पठाएका छन् । कृषि टेलिभिजनको युट्युव च्यानलमा अपलोड गरिएका फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल सम्बन्धि बनाएको सामग्री हटाउन भन्दै धम्कीपुर्ण भाषाको प्रयोग गरिएको छ । कुमार कसजु श्रेष्ठले भनेजस्तो हामीले सकैप्रति पुर्वाग्रही भएर समाचार संप्रेसन गरेको कुरामा कुनै सत्यता छैन् । र हामीले एउटा सञ्चार माध्यमको दायित्व निर्वाह मात्रै गरेको पनि हेक्का होस् । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने ल्याकत छ हामीमा । राम्रो गर्नेलाई राम्रै भनेका छौ हामी र नराम्रो गर्नेलाई सधैं खबरदारी पनि गरिरहेका छौ । सञ्चार माध्यमको धर्म नै हो लुकेका र लुकाईएका घटनालाई बाहिर उजार गर्ने । हो हामीले पनि त्यही गर्यौ । यदि समाचारप्रति कुनै आपत्ती भए कुनै गुणासा भएको भए उजुरबाजुर गर्न सक्ने ढोका खुल्ला थियो । तर कसजुले त्यो नगरी एउटा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई सिधैं धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै फोन, एसएमएस र चिठ्ठी पठाउनु प्रेस स्वतन्त्रताकै खिल्ली उडाएको छ । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले सरकारसँग २१ करोड लियोस् की १० करोड लियोस् यसमा हाम्रो कुनै सरोकारको विषय होईन् । तर सरकारसंग लिएको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग भयो की भएन पुष्प व्यवसायको हक अधिकार र प्रवद्र्धनमा खर्च गर्यो की गरेन आम चासोको विषय हो । यदि कसैले पनि जनताको रगत र पसिनाबाट उठेको करको दुरुपयोग गर्छ भने हामी सधैं खबरदारी गरिरहन्छौ चाहे त्यो जुनसुकै संघसंस्था वा व्यक्ति नै किन नहोस् । हामी कहिल्यै कसैको धम्कीबाट बिचलनमा पर्ने छैनो र हाम्रो पाईला कहिल्यै डगमगाउने छैन् ।
« प्रतिनिधिसभामा डा. भट्टराईले गरे साहसिक कुरा ,सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरौ
विरअस्पतालमा नया प्रविधियुक्ति उपकरण भित्रियो, उपचारमा सहजता »